Motility - Iyini? Bonisa ukuthuthukisa motor amakhono
Fine motor amakhono - amakhono ehilela ukuqaliswa imisebenzi lwamathambo, kwemisipha ne zezinzwa. Ngokungafani amakhono ezinkulu motor ehilela running kanye jumping, enendawo ukubhekana esinembile, okudinga ukuba agxilise ingqondo ukunyakaza. Ngokuvamile, lezi namakghono athuthukiswa kancane.
Sihlakulela motor amakhono
Izingane unezinkinga emihle motor amakhono, kahle ithuthukiswe imisipha izandla futhi izihlakala. Kunezinhlobo eziningi imisebenzi yokudlala ukuthi loku kubanika ematfuba ekufundza ukuthuthukiswa emihle motor amakhono. Ukwakhiwa kwemibhoshongo aphume amabhlogo, ukumodeliswa ngebumba nofana ngehlama yokudlala, ubuhlalu stringing, ikhambi zonke izinhlobo puzzle, okufanele iminyaka - zonke lezi kanye neminye imisebenzi eminingi edinga kumaphesenti athile ukunemba nokusiza ukufunda amakhono abawadingayo.
Elikhulu futhi emihle motor amakhono
Uyini emihle motor amakhono? Lokhu ukusetshenziswa imisipha izandla, iminwe futhi izihlakala. Izingane ukusebenzisa lamakhono nababhala, ubambe izinto ezincane, izinkinobho zezingubo, phezulu Amakhasi, ngesikhathi sakusihlwa, ukusika nge sikelo, abasebenza ikhibhodi. Ukuba yingcweti konke lokhu kudinga ukucacisa kanye nokudidiyela. Ngokusho kochwepheshe, le sleight esandleni ngokuqondile okuhlobene nokuthuthukiswa kokusebenzisa umkhumbulo. Kuyinto ngetandla ingane ubonisa ukuthi kukhona ukuhlobana phakathi ngemicabango nangezenzo. Ngakho-ke, motor amakhono - lokhu kubaluleke kakhulu. Ukuze ukuthuthukiswa yakhe, kukhona lenqwaba amathuluzi nezinto zokuhlobisa. Kungaba multi anemibala paper clip, omfisha, iraba, izitika, ubuhlalu, ubuhlalu, amabhlogo, isihlabathi emincane nokunye okuningi. motor Gross eba izenzo kancane ngokushesha, izibonelo ezinjalo zilawulwa kufana nokujikijela ibhola, kanye nokuhamba futhi agxuma. amakhono Motor nokusetshenziswa namaqembu amakhulu imisipha zidinga ngokunemba kancane.
Ukudlala ne inhlama
Ukudlala ne inhlama baphakathi imisebenzi ozithandayo kakhulu emashumini. Lena akuyona nje ezithakazelisayo, kodwa futhi ewusizo. Ngosizo ukumodeliswa ukuthuthukisa abanye amakhono abalulekile. Uma cindezela welulele inhlama, imisipha eqinileyo iminwe, futhi umuzwa uxhumana umuzwa esibalulekile nakho. Yiqiniso, test langempela of baking - lena enye indlela enhle kakhulu ukudlala futhi ufunde ngesikhathi esifanayo!
Penda usebenzisa izandla neminwe akuzona kuphela fun futhi engavamile, kodwa kuthuthukisa motor amakhono ukuzivocavoca ngesandla kweliso futhi dexterity ibhukwana ingane. Okudingekayo salokhu: i Iyizeli noma ucezu obukhulu iphepha, umunwe upende nesikhala.
Njengomthetho, izingane nje amanzi. Ukusebenzisa isithakazelo sabo konke entsha futhi engavamile, kungenzeka ukwenza ukuthuthuka kwemizwa ngesikhathi esifanayo yokuchitha isizungu futhi kuvuze. Ungathatha nezitsha ezimbili ezihlukene, omunye ogcwele amanzi kanye nezinye awunalutho. Nika ingane isiponji asiza aligcobhoze emanzini. Khona-ke ndawonye ukuze ngawakhamela umswakama isipanji kolunye isitsha. Lo mdlalo elula kusiza ukuqinisa izandla ngemilenze. Inqubo zingenziwa okuthakazelisayo nakakhulu ngokungeza ku Bubbles inkomishi noma ukudla Umbala.
Umgexo eyenziwe macaroni
Stringing tinhlobo letehlukene ubuhlalu kuyindlela enhle ukuze ukuthuthukiswa amakhono zokudala wengane, sithuthukisa ngesandla kweliso futhi ithuthukisa nekhono lokusebenzisa ngobuhlakani izinto. Okokuqala, ungasebenzisa ngentambo uqweqwe ubuhlalu ezinkulu noma, isibonelo, izingcezu ezinkulu pasta ezomile. Nge ukwakhiwa kungaba kancane kuyinkimbinkimbi nakakhulu ngokuhamba kwesikhathi, besebenzisa imininingwane zikanokusho.
Izihloko ezenziwe iphepha
Ithuluzi eliphumelelayo ukuthuthukiswa motor amakhono kukhona yezandla. Ake ingane yakho ukudlala amakhrayoni nezimpawu ukudala siqu imiklamo yabo ehlukile namaphrojekthi ephepheni. Lapho umdwebo ingasetshenziswa njengendlela ngamabhulashi akhethekile neminwe. Njengoba izingane zikhula ingasetshenziswa ukusika iphepha sikelo. Lezi zinyathelo zizoba ukumsiza ukuba afunde indlela yokusebenzisa izihlakala izandla neminwe. yobuciko Eqoshiwe, ungasebenzisa glue kuya siphenduke into ngakuthathu, nakho okudinga izinyane eziningi imizwelo eyakhayo.
Izingane ezindadlana zingaba ukuthuthukisa amahle motor amakhono ngokumane ethatha ukuzinakekela. Ngokwesibonelo, uma ingane ifaka ngokwakhe, angababaza ukubophela izinkinobho izinkinobho, babopha izimbadada. Ake ingane yakho zama yena ukuxubha amazinyo abo, izinkinobho umbani kanye nekama izinwele zakho. Okunjalo imisebenzi elula - futhi uhlobo motor amakhono, kusenzima isikhashana ezinhle zemfundo sokuthuthukisa umuzwa wokuba nomthwalo wemfanelo.
Ukusebenzisa imisipha ezifanayo zingakusiza ukuba izingane ukuthuthukisa inkumbulo kwemisipha. Kubalulekile ukuba overdo it phakathi nokuqeqeshwa, akudingekile ukunikeza ingane umsebenzi kakhulu kuye. Noma yimuphi umsebenzi okufanele ukumkhuthaza ukuba aqhubeke efunda, mnandi futhi abangele imizwelo eyakhayo.
Acupressure Face - ebuhleni futhi niqaphe impilo
Yiziphi emithanjeni? Sakhiwo umsebenzi. emithanjeni
Embundwini ubuhlungu - zonke engaziwa
Ukusangana - Iyini? ukusangana sokuzwa: Izimbangela, Ukwelashwa
Ingabe kungenzeka ukuba afeze ukulungiswa ngokwakho blood pressure ngabaqaphi?
Iningi Hookah Novosibirsk. Incazelo lesikhungo.
Yemaphepha Belarus: umlando, ukuzinza
Kuyini umshayeli, incazelo Wabasaqalayo
Ikotishi yokugezela nge yangasese. emgwaqweni yangasese apharathasi
Uyini umehluko isikhathi Ukraine: Omunye ihora noma amabili?
I-Shmeleva Tatiana: i-biography emfushane, ukubamba iqhaza kule phrojekthi
Nature Austria: entabeni umbukwane kwenkundla
Theatre "Black Square". Art enta taba ukukhunjulwa umbukeli
Analogue "Dolobene" ezishibhile. "Dolobene": Russian Analogue
Buka Claude Bernard: incazelo, izici, ukubuyekezwa